एउटालाई लगाउनु पर्ने सुई अर्कोलाई लगाएपछि विरामीको मृत्यु ! - Dna Nepal
एउटालाई लगाउनु पर्ने सुई अर्कोलाई लगाएपछि विरामीको मृत्यु !
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार ०३:४९
अस्पताल प्रशासन र आफन्तबीच बुधबार वार्ता भएपनि निष्कर्ष बिनै टुङ्गिएको छ । अस्पतालको तर्फबाट वार्तामा बसेका डाक्टर फोन सम्पर्कमा आएका छैनन् । वार्ताको क्रममा अस्पताल प्रशासनका ब्यक्तिहरुले अर्काे सुई लगाउनु गल्ती भएको स्वीकार गरेपनि सुईकै कारण बिरामीको मृत्यु नभएको दाबी गरेको समाचार आजको ढोरपाटन दैनिकमा छापिएको छ ।